गृहा पृस्था हाम्रो बारेमा
शिक्षाको स्तर बढ््दै जाने क्रममा यहाँका अभिभावकहरुले उ.मा.तहको पठनपाठनका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्नतिर अग्रसर रहे । यसका लागि प्रत्येक महिनामा एक दिन उपवास (भोकै) बसेर आफ््नो घरपरिवारको एक छाकको सम्पूर्ण खाद्य सामग्री विद्यालयलाई दिने कार्यक्रम गरे । वि.सं. २०६६०३११ मा विद्यालयले उ.मा.शि.प. बाट सम्वन्धन लिई हाल यस विद्यालयमा कक्षा १२ सम्म पठनपाठन भइरहके ो छ । कक्षा १११२ मा शिक्षा र बाणिज्य संकायकोपठनपाठन भइरहके ोछ । विद्यालयकोसमग्र हित, उन्नति प्रगतिका लागि विद्यालयका शिक्षाप्रेमी अभिभावक, शिक्षक–कर्मचारी, स्थानीय सामुदायिक वन लगायतका संघसंस्थाहरु सबै आ–आफ््नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध रहेका छन्् ।